Intuthuko Ongayisebenzisa Ekumaketheni Komphakathi Namuhla! | Martech Zone
Ingxenye ekhulayo ye- imizamo yokumaketha engenayo esiyisebenzisayo ezinkampanini zifaka phakathi amasu ezokuxhumana akhokhelwayo nawuphilayo. Ngihlala ngishaywa umoya yizindaba eziqhubekayo zokuthi izinkundla zokuxhumana azitholi imbuyiselo yotshalomali izinkampani ezikutholayo kwenye indawo. Kukho konke ukwethembeka, ngicabanga ukuthi kungenxa yokushoda kokubulawa necebo elihle, hhayi okuphakathi. Siyaqhubeka nokubona ukukhula kwezokumaketha komphakathi futhi kube ngempumelelo emangalisayo ekushayeleni izindleko zethu ngokuhola ngakunye.
NgoNyaka Omusha kuza Izinqumo Zonyaka Omusha. Mhlawumbe okwakho uya ejimini, ufunda ulimi olusha noma nje uphumule ngokwengeziwe. Noma ngabe izinqumo zakho zingaba yini, kunethuba elihle lokuthi ama-akhawunti wakho wezokuxhumana angasebenzisa isiqalo esisha kuNyaka Omusha, futhi. Yingakho sihlanganisa lolu hlu lwezinqumo eziyi-10 zemidiya yezenhlalo ukugcina umkhiqizo wakho usendleleni.
Nawa amathiphu ayi-10 Wokusetshenziswa Kokumaketha Kwezenhlalo
Sebenzisa okubonakalayo okuningi
Thola Isikhathi Sakho Esihle
Ukuhlola Usebenzisa Izikhangiso Zomphakathi
Yenza Okuthunyelwe Kwakho Kuhambe Ngevidiyo
Sebenzisa ama-hashtag kwesokudla
Lungiselela Okuthunyelwe Kwamapulatifomu Ahlukile
Thumela Okuncane Ngawe
I-Master Mobile Marketing
Ukudalulwa: Singabanxusa be- Qala.
Tags: ama-hashtagukusetshenziswa kwesithombeizikhangiso zomphakathiokuqukethwe ezokuxhumukuzibandakanya kwezokuxhumanaama-hashtag ezinkundla zokuxhumanaizithombe zokuxhumana nabantunokwenza kahle ezokuxhumamapulatifomu ezokuxhumanaizinqumo zokuxhumana nabantuisikhathi sokuxhumana nabantuividiyo yezokuxhumanaukumaketha kwamaselula omphakathiividiyo yomphakathi